मिरमिरे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ औँ बार्षिक सधारण सभा सम्पन्न – BSN.COM.NP
बारा, २२ कार्तिक ।
बारा जिल्ला कलैया उप–महानगरपालिकाको वडा नं. २३ मा रहेको मिरमिरे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ औँ बार्षिक सधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उद्घाटन बारा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष सत्येन्द्र ठाकुरले गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ठाकुरले ७ वटा मैनबत्ती बालि उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा संस्थाले २ सय १० शेयर सदस्यहरु बीच करिब १ करोड रुपैयाको कारोबार गरेको छ । संस्थाको कुल पुँजी १ लाख ६ हजार ७ सय ६९ रुपैया रहेको छ भने निक्षेप बचत ६९ लाख ७५ हजार ५ सय ८४ रुपैया रहेको छ । सहकारीले आर्थिक बर्षमा १५ लाख २२ हजार ९ सय ४० रुपैया नाफा आर्जन गरेको संस्थाका ब्यवस्थापक शम्भुनाथ महतो कोइरीले जानकारी दिनुभयो ।
साधारण सभामा संस्थाका लेखा संयोजक मानिकचन साहले सहकारीको बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सहकारीको बिगतको कार्यको समिक्षा गर्दै र भावी रणनितीको बिषयमा जानकारी दिनुभयो । शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाले ३ प्रतिशत लाभाँस बितरण गर्ने लेखा संयोजक साहले बताउँनुभयो ।
मिरमिरे साकोसका अध्यक्ष झकड महतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मनत्बय संस्थाको सचिव बिजय कुमार पटेलले राख्नुभएको थियो । वहांले संस्थाको आर्थिक र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्दै कारोबार बढाउने बिभिन्न आयामको बिषयमा सहभागिहरुलाई जानकारी दिनुभएको थियो । कर्यक्रममा ओम साकोसका अध्यक्ष अमिचन महतो, जनस्वास्थ्यका कर्मचारी रिसिदेव साह कानु, लेखापरीक्षक शशिभुषण चौधरी, समाजसेवी काशिनाथ साह लगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।